China Metal To Metal Ball Seza orinasa sy mpanamboatra | Future
Ny valizy sy ny seza valizy metaly no ampahany lehibe amin'ny valves amin'ny vy mipetraka.
Ny valizy sy ny seza valizy metaly no ampahany lehibe amin'ny valves amin'ny vy mipetraka. Natao ho an'ny tsindry mafy, ny mari-pana ary ny toetr'andro mahery vaika, toy ny fanapahana na fampifandraisana granula matevina, slurry voarendrika, herin'ny arintany, cinderera manaparitaka, rano etona na rano hafa sns. Noho izany dia manana ny endrika fananganana anti-static, fanampiny saron-javatra henjana, kofehy feno ary fihenan-jaza, endri-javatra azo antoka amin'ny afo mifanaraka amin'ny API607, ary azo antoka famehezana.
Metal seza sy baolina dia vita amin'ny metaly fototra mifono matetika Chrome mafy, tungsten karbida, zanabolana ary Ni60. Izahay dia samy manana rakotra fanefitra hafanana sy fisarona famaohana mangatsiaka azo alaina toy ny Laser Cladding, HVOF (High Velocity Oxy Flame) Coating, Oxy-acetylene flame spray, Plasma Spray process.
Ball sy seza mikorisa
Ho an'ny baolina sy seza mipetraka amin'ny metaly dia tsy maintsy manome vahaolana valizy feno valizy feno ho an'ny mpanjifa izahay satria mila milelaka ny baolina sy ny seza alohan'ny handefasana azy hanompo. Nandritra ny taona maro, nanamboatra teknolojia tsy manam-paharoa milomano baolina ho an'ny baolina sy seza mifono izahay. Amin'ny alàlan'ny fitarihana mitovy sy hafa ny fihodinana, ny baolina sy ny seza dia miteraka fihodinana sy fahasalamana tonga lafatra, hahatratrarana ny "Zero Leakage"
Famaritana baolina valizy metaly mipetraka
Fanoherana ny hafanana
ASTM A105 (N), A350 LF2, A182 F304 (L), A182 F316 (L), A182 F6A, A182 F51, A182 F53, A564 630 (17-4PH), Monel, Alloy sns.
Famafazana hafanana sy famaohana mangatsiaka:
Ni60, Carbide Tungsten, Carbide Chrome,
Kisarisary 6 # 12 # 20 #, Inconel, sns
Previous: T-karazana baolina telo-lalana QC-301
Manaraka: Ball mitsingevana
Kitapo vy amin'ny vy sy fonosana vy.
Vy amin'ny vy sy seza-2